uDig, aragti hore - Geofumadas
uDig, aragti ugu horeysay
Janaayo, 2010 Geospatial - GIS, GvSIG, aragti ugu horeysay, uDig
Waxaan hore u eegnay qalabyada kale ilo furan degaanka GIS, oo ka mid ah qgis iyo gvSIG, marka laga reebo barnaamijyo aan lacag la'aan aheyn waan tijaabinay ka hor Xaaladdan ayaan ku sameyn doonaa Internet-ka-Isticmaal-Khariidadda Internetka GIS (uDig), mid ka mid ah kuwa soo galaya PortableGIS.
Halka ay ka timaado
UDig waa dhismaha shirkadda Cadaadiska Cilmi-baarista, ka dib markii uu ku guuleystay abaalmarin muhiim ah oo ay maalgeliso GeoConnections, waxay ku maalgeliyeen arrintan iyo horumar kale. Shatiga uDig waa GNU LGPL, isla shirkadani waxaa ku waajib ah horumarinta PostGIS iyo saamiyo muhiim ah ee Geoserver.
Waa horumar horumarineed, jebinta heshiisyada badan ee qalab dhaqameedka, wejiga oo la mid ah qgis. Waxaa ka mid ah sifooyinka astaamaha lagu sheegi karo:
Waxaa lagu dhisay Java, ka dib jawiga dabiiciga ah (sida gvSIG)
Xoriyadda saxda ah ee dhexdhexaadintu waa mid xurmo leh, inay awood u yeeshaan in ay jibbaaraan daaqadaha meel kasta, iyaga oo ku hirgaliya asalka, jiiditaanka dibadda iyo gudaha, iyaga oo yaraynaya badhamada iyo wax ka bedelida geesaha madoow.
Xawaaraha dilka waa mid aad u wanaagsan (inkastoo uu ku saabsanaa Java, waxaan isku dayay a Acer Aspire One, oo leh Windows XP); Waxay ku socotaa Linux iyo Mac, sida muuqata waxqabadka wanaagsan.
Ku saabsan akhrinta qaababka vector, waxaa ku xaddidan faylal kala duwan (ma akhriyo dgn, kml, dxf, ama dwg) laakiin kuwa sigaar cabba (gml, xml). Kaliya kan kaliya ee aqriya waa kan qaabeynta qaabka.
Sawirro raajo ah ayaa sidoo kale leh xaddidaadyo, laakiin waxaad ku dhejin kartaa adeegyada adeega iyo adeegyada kale ee internetka.
Marka la eego xogta macluumaadka waa mid xoogan, ArcSDE, DB2, MySQL, Oracle Spatial, PostgreSQL/ PostGIS iyo WFS, sidaa daraadeed iyadoo qaar ka mid ah kuwaan aad ku dari kartid xogta vector ee aan ku helin hab caadi ah.
Qorshaha, miisaanka miisaanka iyo halyeeyga ayaa isku dhafan sida haddii ay ahaayeen lakab. Tani waa mid xiiso leh sababtoo ah ma aha kuwo shaqaynaya interface interface laakiin macluumaadka. In kastoo qaabeynta ay tahay mid dhexdhexaad ah (marka hore aragtida)
Waxay leedahay waxyaabo ku haboon, sida:
-nuqul / dhejin de muuqaalada (sida GIS kala cayncayn ah)
-sida sida XML en farriin
-calaamad aad u macquul ah, oo leh digniino Ka fogow dhibaatooyinka indhoolayaasha midabka, kormeerayaasha CRT, mashruucyo, muraayadaha LCD, daabacaadda midabka iyo sawir qaadashada.
Waxaa xiiso leh in qalabkani uu caadi ahaan la yimaado tusaalayaal habeysan, oo ay ku jiraan bulshada Kanada iyo macluumaad guud ee magaalooyinka, waddamada, goobaha saacadaha iyo sawirada dayax-gacmeedka. Qorshahani waxa uu yahay awoodda aad u fiican si ay u fahmaan marka ay u arkaan markii ugu horeysay, taasoo qaadan waa akoonka barnaamijyada kale ee la bixi, rakibay oo dhalin su'aasha weynOo haddaba maxaan ku sameeyaa badhanahan??
Raadinta casriyeynta internetka ayaa ah qaab kale oo wax ku ool ah oo mashaariicda kale loo baahan yahay. In this, xoogaa la mid ah gvSIG, waxaa jira kala ooday on aragti ugu horeysay, waa in Xoolaha waa in loo kordhin ah oo aan haysan suuq ku filan ama ka maqan darawalka in kor ay faaiidada (iyo haddii officialdom) thread. Ugu yaraan la update this online (taas oo uu leeyahay gvSIG qoridda) haddu qaarkiin daqiiqado yar ka dib ayaan arki kartaa awoodaha badan oo aad ka heli in kordhin Grass ah, JGrass, SEXTANTE, Horton Machine iyo Axios ee codsiyada hydrological, qaababka 3D, isdhexgalka GPS, raser iyo vector.
UDig waxay leedahay waxyaabo xiiso leh, sida qGIS waxay ku xirantahay JGrass, laakiin sidii xal loo helo maaha qalabka ugu fiican oo furan, marka la eego farsamooyinka dhismaha vectorial iyo maaraynta topology, qgis (iyada oo la kordhinayo ballaadhanka) GvSIG (iyada oo aan la kordhin). In kastoo uu kobocdo, oo leeyahay waxa ah isticmaale caadi ah laga yaabo inuu u baahdo, suurta galnimadu waxay u tahay isticmaalaha awoodda horumarinta Java; qaabkaaga Internet GIS Waxay macno u tahay in ay ku xidhmaan xogta iyo raadinta wixii cusbooneysiin ah, laakiin illaa inta daabacadu wax yar maaha inay bixiso (Geoserver sameeyo).
Akhri qaabab CAD / GIS ah, ma aysan suuro galin inay dhex galaan bulshada dhexdeeda in gvSIG, taas oo ah, baahida loo qabo isticmaalaha iyo isbaheysiga istaraatiijiyadeed ayaa ah xeelad muhiim ah oo lagu hormarinayo horumarka, taas oo ah arrin ma muuqato Ku guuleysiga gvSIG (haa heerka Kanada, laakiin ma aha mid caalami ah).
Xaqiiqda ah jebinta mashruuca Waxay kaa dhigeysaa inaad lumiso labo dhibcood, maaddaama dadka isticmaala badani ay noqdaan kuwo xakameynaya bilowga (maareynta mashaariicda, liiska iyo aragtiyaha). Ka soo kabashada qodobbadan si fudud in aad leedahay mar marka aad ogtahay sida loo shaqeeyo, inkasta oo falsafadda muraayada jiilka waa inaad ka taxadartaa dheelitirka si markaa aasaaska aasaasiga ah ee dheeraadka ah (oo macno samaynaya) uusan u muuqan (sida koritaanka bilaashka ah) geedka kirismaska kuwaas oo lagu xardhay tiro nambarro badan oo hal maalin ah lumay, ama isku-noolaansho, ama isku-siman, ama jadwalka.
Aan si fiican loo aqoon waa khasaare wayn (taas oo ku dhacda dad badan oo kale), oo ah xal xalka xulashada ma aha damaanad waqti-dheer ah, ee aan ku jirin dalabyada ilo furan; sidaas darteed, wax yar nidaaminta khibradaha iyo dukumeentiyo, inkasta oo qawaaniintiisa ay ku sameyso go'aano cusub la aqbali karo. Degmada, uDig waxay noqon kartaa xal fara badan, laakiin helitaanka taageero iyo tababar ayaa noqon kara dhibaato isku dhafan (ka fog British Columbia); waxay u egtahay mid aad u macquul ah mashaariicda kuwaas oo ku lug leh shakhsi ahaaneed iyo in ay yeelan doonaan miisaaniyad si ay u taageeraan (tusaale ahaan, bay'ad, nugul).
Marka laga reebo mashruuca baradho ee Peru iyo waxa Axios wariyay, wax yar ayaa laga maqlaa uDig degaanka Hispanic; sii wadida xalalka noocan ah ee heerka wadanku waxay ku xiran tahay codsiga siyaasadaha ee socdaalka dhinaca bilaashka ah, mawduuc oo aad u gaabisa Latin America.
Dhibaatada ugu weyn ee aan arko uDig waa sii waarida muddada dheer, xaqiiqda ah inay tahay qalab taageera shirkad gaar ah waxay abuureysaa shaki xagga su'aalaha sida:
Iyo haddii baaritaanka Refractions Research uu sheego hal maalin in kharashyada taageerada iyo horumarka sii socota ay yihiin kuwo aan la aqbali Karin, yaa sameyn doona?
Bulshadu ma abuuri kartaa dhaqdhaqaaqa kobaca caalamka, haddii ay dhacdo baahi weyn?
Ma jiraan mashaariic kale oo Java / Qaadasho ah oo sameeya, taas oo ah Ilaha furan, taas oo u muuqata dadaal dheeri ah?
Ma muuqato in qalabyada xorta ah ay yihiin istaraatiijiyadaha shirkadaha ugu dambeyntii ka baxaya taageerada?
Run ahaantii mara Open Waxay leedahay jawaab cad oo kor ku xusan, laakiin waa lagama maarmaan in ay ka fekeraan waaritaanka, taas oo lafteeda ay ku adag tahay mashaariic bilaash ah, sababtoo ah haddii aynu kala saarno dhinacyada farsamada iyo farsamada ee u muuqda inay si cad u shaqaynayaan, dhinaca dhaqaalaha waa su'aal muddada dheer. Maanta waxaan ku noolnahay waqtiyo marka duufaanku keeno nidaamka dhaqaale ee aduunku inuu burburo, a zapatazo in shirku uu kicin karo dagaal kaas oo ku dhammaanaya hal maalin oo leh aalado fiican, dayrta suuqa saamiyada ee ka hooseeya sababaha la aqbali karo sababaha keena shirkadaha waawayn inay ka baxaan fuck in ka yar saacad.
Waxyaabahaas, naga dhig in aan u maleyno in ka hor inta badan (iyo haa taas oo aad u badan) oo ah xalka xorriyadda buuxda ee dadka, khatar gelinaya kala qaybinta dadaalka iyo lacagta (maxaa yeelay ugu dambeyntii kharashkaas). Xorriyadda waxay noqon kartaa mid aad u weyn maalin maalmaha ka mid ah waxaa loo isticmaali karaa in laga tago mashaariicda go'aannada dadka kale ee aan aasaasay fikradda asalka ah. Marka la eego ceymiska iyo dad badan ayaa qoray, laakiin waa inaan sii wadno si taxadar leh u fekernaa, xusuusnaansho in hal maalin aanu cabbiri doonno maalgashiyada saameyn maaha geofumada.
Horumarinta: aad u adag oo wax ku ool ah, mashaariicda kale waa in ay ku daydaan fikradaha halkan.
Xalka: waxay leedahay xaddidaad weyn marka la barbardhigo kuwa kale ee heerkooda, (aragti hore)
Mashruuc ahaan: wuxuu u socdaa si tartiib tartiib ah mana u muuqanayo inuu si degdeg ah u socdo.
Marka aad isku dayeyso kordhinta, waxaan ku siin karnaa qodobbada aad ku dartid ka dib aragtida koowaad.
Post Previous«Previous CD Cilmiga Waxbarashada, khayraad weyn oo lagu barayo
Post Next Poker, wax ka bedelka dhibaatadaNext »
12 Jawaab "uDig, aragti hore"
Laakiin waxaan durbadiiba xalliyay iyada oo la nuqulayo sqljdbc.jar ilaa faylka lib ee JRE.
Boggaagu waa mid aad u wanaagsan Hambalyo
Waa maxay nooca JRE ee aad ku soconeyso?
Waxaan caddaynayaa in aan ku rakibay nooca 1.2 ee uDig ee XP. Sida haddii ay taasi ...
Waxaan hadda soo dajiyay iDig waana jeclahay.
Waxa kaliya ee aniga i xiiseynaya waa in aanan garaneynin sida loo helo sqlServer 2008 database. Marka aan sameeyo:
ku dar lakab -> DataStores-> MS SQL Server
Waxaan helaa ogeysiis dhahaysaa: "Warshaddan lamaheli karo, badiyaa waxay muujineysaa JDBC la la 'yahay, ama muuqaal-sawir EXT-ka laguma rakibi karo JRE".
Oo labadoodaba waa la rakibay oo loola shaqeeyaa GEOSERVER. Su'aashu ma tahay wadada rakibaadda uDig? GeoServer waa inaad u guurto maktabado qaas ah oo gaar ah. Iyo in uDig?
Haddii qofku leeyahay wax khayaali ah, waan u mahadcelinayaa haddii ay i caawiyaan.
Haa, dabcan way awoodi kartaa.
Xitaa SQL Server 2008 horeyba waxaa ku jira taageerada joogtada ah.
Ma leedahay fursado aad ku xirto MS SQL Server 2008?
Waa Java. Hubi isku xirkaan.
Caawinaadu waa mid aad u wanaagsan, fursadda saafiga ah ma ogaan kartid luuqadaha barnaamijka ee taageeraya si loo ballaariyo kartidooda? Ma waxaan samaynayaa daraasad geomarketing oo waxaan xiiseynayaa barnaamijka GIS
Waad ku mahadsan tahay waxtarka, halkan waxaan ka tagayaa xiriirka
SoyUnDivo isagu wuxuu leeyahay:
Diva waxay ku socotaa UDIG! Waxaa jira dhowr faafin oo ku saabsan cimilada iyo qaabeynta biotamatik sida tan middan. Waa mashruuc ay ururada kale ku biiraan, taas oo si gaar ah u damaanad qaadaysa mustaqbalka.
Haa, waad saxantahay, waxaa jira fiditaano xiisa leh, sida kuwa mashiinka Horton, oo ay kujiraan moodooyin dhijitaal ah oo aad u xiiso badan iyo dalabyo biyo; iyo, kuwa leh SEXTANTE, Grass iyo JGrass waxaa ku yimid raster iyo vector function function badan.
Waxaan sameeyay hagaajin gaaban boostada, laakiin waxaan arki doonaa meelaha kale markaan isticmaalno ballaarinta.
UdigoYo isagu wuxuu leeyahay:
Adigu si xad dhaaf ah uma xaddidan tahay inaad faallo ka bixiso. iyada oo kordhinaysa wax badan